Huawei Mate 30 Pro - ယနေ့အထိ "Premium" အများဆုံး Androidsis
Mate 30 Pro နှင့် Huawei ၏“ အကောင်း” ဖြစ်မှုကိုအသေးစိတ်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | | Android ထုတ်ကုန်များ, Huawei, NOTICIAS, reviews
အကယ်၍ သင်သည်နောက်ကျမှကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါက Huawei Mate 30 Pro ကိုရက်ပေါင်း ၂၀ ခန့်ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲအပ်ထားကြောင်းသတိပြုပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ပြီး၊ ၎င်း၏ကင်မရာများနှင့်အခြားအရာများကိုစမ်းသပ်ရန်လုံလောက်သောအချိန် ကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုယူဆောင်လာရန်လိုအပ်သည့်အတွေ့အကြုံများကိုရရှိခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Huawei Mate 20 Pro နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံး၊ မည်သည့်အရာကိုအနည်းဆုံးကြိုက်သည်ကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါမည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် Huawei Mate 30 Pro နှင့်၎င်း၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှာဖွေပါ။ သင်သည်အဘယ်သို့ဆုံးရှုံးတာပေါ့?
ငါတို့ unboxing ကိုသင်လွဲသွားပြီဆိုရင်ကြည့်ရတာကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ဤသီးသန့်ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသေတ္တာထဲမှထုတ်ယူခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အဘယ်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းလိုပဲထိပ်ဆုံးမှာသင့်ကို YouTube ဗွီဒီယိုကိုချန်ထားခဲ့ပြီး၎င်းကိုကိရိယာကိုနက်နက်နဲနဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး၎င်းရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဘယ်လိုမြင်တွေ့နိုင်မှာလဲ။
1 ဒီဇိုင်း - လည်ပင်းများစွာကိုလှည့်ပေးမည့်စမတ်ဖုန်း
2 နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ: ဘာမှမလွတ်ပါနှင့်
3 စုပ်ယူနိုင်သောမျက်နှာပြင်နှင့် Full HD + သို့ပြန်သွားခြင်း
4 ပထမ ဦး စွာ Google Play စတိုးကိုထည့်သွင်းပါ
5 များစွာသော extras, ဒါကြောင့် "ပရီမီယံ" ကြောင့်
6 ကင်မရာများ - Huawei ၏ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်အလွန်ခုန်ချသည်
ဒီဇိုင်း - လည်ပင်းများစွာကိုလှည့်ပေးမည့်စမတ်ဖုန်း
Huawei သည်ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းပြီးဖြစ်သော Huawei P30 Pro ကို terminal ဒီဇိုင်း၏အနည်းငယ်ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ထည်နှင့်ရှေ့မျက်နှာပြင်အတွက်ဖန်သားအတွက် polished metal ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ မျက်လှည့်မျက်နှာပြင်၏နောက်ကျောနှင့်ရှေ့ curvature အကြား terminal ၏ဘေးနှင့်အခြမ်းအကြားမှော်သည်ဖန်နှင့်စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါးလွှာသောသတ္တုကိုယ်ထည်ကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုဖိအားပေးရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရန်လိုသည့်မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ကိုပြုလုပ်ထားသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်တစ်ချက်ကြည့်။ အာရုံစိုက်နေကြသည်။
ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရွယ်အစားမှာ ၁၅၈.၁ x ၇၃.၁ x ၈.၈ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ အလေးချိန်မှာ ၁၉၈ ဂရမ်ထက်မပိုသည်။ ငါတို့ကအဆင်ပြေတဲ့ terminal တစ်ခုရှေ့မှာရှိတယ်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာကသူသည်မခိုင်ခံ့သောခံစားချက် (မမှန်ကန်သောခံစားမှု) ကိုပေးပြီးခြေရာခံရန်သံလိုက်ဖြစ်သည် မင်းပြသဖို့မင်းဆင်းရဲဒုက္ခခံရတယ် သူတို့ကအဖြစ်။ P30 Pro နဲ့အောက်ခြေမှာ USB-C, speaker output, microphone နဲ့ card slot တွေရှိတယ်။ အောက်ဘက်မှာလည်းပြားချပ်ချပ်ရှိတယ်၊ ငါတို့မှာအနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာနဲ့အခန်းထဲမှာမိုက်ခရိုဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်။ ၎င်း၏အစွန်းရောက်နောက်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အာရုံခံကိရိယာလေးခုတပ်ဆင်ထားသောကြီးမားသောမြို့ပတ်ရထားကင်မရာ module ရှိသည်။ ကျနော်တို့အနက်ရောင်ဗားရှင်းကိုကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ မူအရမူကြမ်းအရောင်နှင့်အတူစပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသောပုံစံဖြစ်လိမ့်မည်။ ရှေ့မျက်နှာ၌ရှိသည့် notch နှင့်အတူ (အဆင့်မြင့်မျက်နှာစကင်နာဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်) ၎င်းသည်ဘေးထွက်ခလုတ်များ၊ “ သော့ခတ်ခြင်း” အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့်တစ်ခုတည်းနှင့်သေးငယ်သောခလုတ်ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမဆုံးကြီးမားတဲ့ပျက်ကွက်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာ volume ခလုတ်တွေမရှိဘူး၊ အရာကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ Huawei Mate 30 Pro သည်နူးညံ့သောအလှအပရှိပြီးလက်ဝတ်ရတနာတစ်မျိုးနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအသံကိုမလိုချင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်စမတ်ဖုန်းဖြင့်ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုတစ်ခါမှမခံစားခဲ့ဖူးပါ။
ပုံစံ 30 Pro ကိုမိတ်
ရှုထောင့် ၁၅၈.၁ x ၇၃.၁ x ၈.၈ - ၁၉၈ ဂရမ်
ဖန်သားပြင် AMOLED 6.53 "- ၁၈.၅: ၉ အချိုးနှင့် 18.5 *9resolution (1176PPP)
သိုလှောင်မှု 128 GB + မင်ကဒ်
ဘက်ထရီ 4.500 mAh - QC 40W - ပြောင်းပြန်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း
ရေစစ် HEPA မြင့်မားသောစွမ်းရည်
operating system Android 10 AOSP + EMUI 10
ဘက်ထရီ ၅,၂၀၀ mAh (၃ နာရီမှ ၄ နာရီအတွင်း)
extras Dual-Band GPS - NFC - မျက်နှာပြင်လက်ဗွေဖတ်စက် - 3D Face ID - BT 5.0 aptX
အဓိကအခန်း 40MP Cine Cameraf/ 1.8 + 40 MP SuperSensingf/ 1.6 OIS + Telephoto 8MPf/ 2.4 OIS + ToF
Selfie ကင်မရာ 32 အမတ်,f/ 2.0 + ToF
စြေး 1.099 €
ဝယ်ယူ link ကို CONGA ၄၀၉၀
ဤသည်၌ Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် 30 Pro ကို ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြီးမားသောပျက်ကွက်မှုများမရှိပါ Kirin 990 7nm ငါတို့မှာခဏလောက်ပါဝါရှိတယ်ဆိုတာသတိရဖို့အသွင်အပြင်တစ်ခုလုပ်တယ်။ 8 GB RAM မှတ်ဉာဏ် ကြမ်းတမ်းစွာဝါကြွားခြင်းမဟုတ်ဘဲလုံလောက်မှုနှင့်ဘက်ထရီကိုပြသည် 4.500 mAh ဘက်ထရီ အရာတစ် ဦး စစ်မှန်သောနှလုံးရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသည်။ "Premium" လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ကင်မရာသည် Huawei Mate 30 Pro တွင်မှန်ကန်သောဇာတ်ကောင်များဖြစ်လာမည်။
စုပ်ယူနိုင်သောမျက်နှာပြင်နှင့် Full HD + သို့ပြန်သွားခြင်း
ငါတို့တွေ့ပြီ ၆.၅၃″ AMOLED ဘောင်ကွက်၊ ၁၈.၅: ၉ အချိုးနှင့် 6.53 * 18.5 resolution (9PPP), ဒါဟာဆက်ဆက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။ နောက်တဖန်မသင့်တော်သော fit သည်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းစက်ရုံအပြင်အဆင်များနှင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသောတောက်ပမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၌အသုံးပြုရန်လုံလောက်သည်ထက်ပိုရှိသည်။ HDR (နှင့် DolbyVision) မှကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ ပွဲတော်သည်နှစ်ဖက်စလုံး၏ ၉၀ ºကွေးကွေးခြင်းဖြင့်အစပြုသည်မှာသေချာသည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစွန်းမျက်နှာပြင်၏ပုံမှန်ရှုထောင့်ရှုထောင့်များနှင့်ထိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင် chromatic aberrations အချို့ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်း၏ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အတော်အဆင်ပြေသော်လည်းသင်အနေဖြင့်အသုံးပြုရန်လိုသော်လည်း၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများမည်သို့စီးဆင်းနေသည်ကိုသင်မမြင်တော့ပါကဖြစ်သည်။
အသံနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ခြေတွင်အားကောင်းသောစပီကာနှင့်မျက်နှာပြင်မှတဆင့်အသံထုတ်လွှတ်မှုစနစ်ရှိသည်။ နှစ် ဦး စလုံးပေါင်းစပ် decaffeinated ပေမယ့်လုံလောက်သောစတီရီယိုပေးထားပါတယ်။ မြင်ကွင်းနောက်ကွယ်ရှိစပီကာသည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်၊ သို့သော်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများစားသုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်သိပ်မကောင်း။ ဆိုလိုသည်မှာ Huawei Mate 30 Pro သည်အသံကျယ်။ ရှင်းလင်းသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်ထူးခြားမှုမရှိပါ။ ဟုတ်တယ်၊ Huawei က 30 MHz အတွက်ဒီ Mate 90 Pro ကိုမလောင်းဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ငါကြိုက်မှာပဲ။
ပထမ ဦး စွာ Google Play စတိုးကိုထည့်သွင်းပါ
ငါ Huawei App Gallery နှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် EVO Banco, WeChat နှင့် Amazon (မြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီ) ပင်ရှိသည် ကျွန်ုပ်သည် Google Play စတိုးလိုအပ်ပါတယ်၊ ဤ Mate 30 Pro တွင်ကျော်လွှားရမည့်ပထမ ဦး ဆုံးကြီးမားသောအတားအဆီးမှာဂူဂဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမရှိခြင်း၊ Huawei ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရှိနေခြင်းသည်စက်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ဝယ်လိုအားကိုကျေနပ်မှုမရှိ။ ဒီအတွက်ငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် EloyGomezTV ရဲ့သင်ခန်းစာကိုသွားပြီးခင်ဗျားတို့ကိုအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လိုင်းအနည်းငယ်ချန်ထားခဲ့တယ်။ ငါးမိနစ်အကြာတွင် Google Play စတိုးရောက်ရှိလာချိန်တွင်ဤ Huawei Mate 30 Pro သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်လာပြီးအတွေ့အကြုံပြီးဆုံးသည်အထိ၎င်းသည်သီအိုရီအရသာဖြစ်သည်။
အမြဲတမ်း display mode မှာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် EMUI 10.0 ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီပိုမိုကောင်းမွန်သည့် In-camera အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်၊ ပိုမိုချောမွေ့သောအညွှန်းနှင့်ပိုမိုချောမွေ့သော menus များပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအလွှာများသည်၎င်းတို့အားချစ်မြတ်နိုးသည်ဖြစ်စေမုန်းသည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင် EMUI 10.0 နှင့်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုအလွန်ခံစားရသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲပြောမိလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Google Play စတိုးနဲ့ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် YouTube နှင့် WhtasApp ကိုမည်သည့်ပြwithoutနာမျှမရှိဘဲလည်ပတ်စေပြီး၊ အခြား Android terminal များကဲ့သို့သူတို့၏ update များကိုလက်ခံရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Netflix ၏ပြproblemနာအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လုံခြုံရေးစနစ်ကြောင့် terminal နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော version အဟောင်းကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသည်။
များစွာသော extras, ဒါကြောင့် "ပရီမီယံ" ကြောင့်
သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံနှင့်၎င်း၏ထူးခြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်။ ပထမဆုံးမရှိခြင်းမှာ volume ခလုတ်များဖြစ်ပြီး၊ ယခုအချိန်အထိတစ်ခါမျှမလုပ်ဆောင်ဖူးသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးထားသည်။ မျက်နှာပြင်၏အပေါ်ဘက်အပေါ်သို့ထိပုတ်ပါနှစ်ခု (ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်အရာ) ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အသံထိန်းချုပ်မှုနှင့်ထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့် volume control menu ကိုစတင်သည်။ သင်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရှိခဲ့သကဲ့သို့ ။ မေးခွန်းမှာ - လိုအပ်ခဲ့လား Huawei ကိုဆန်းသစ်တီထွင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေမျိုးတွင်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် TWS နားကြပ်နှင့် Mate 30 Pro တို့နှင့်အတူအသံအနိမ့်ဆုံးအချက်များရှိသည်။ သင်၏အိတ်ကပ်ထဲရှိ Mate XNUMX Pro မင်းပြသဖို့မင်းဆင်းရဲဒုက္ခခံရတယ်, ငါအရည်အသွေးဖြေရှင်းချက်ဆောင်ကြဉ်းသောဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုအမျိုးအစားများကိုချီးကျူးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D Face ID၊ အလွန်ထိရောက်သောမျက်နှာစကင်နာဖြင့်ပြန်လည်ပတ်သည် ၎င်း Huawei Mate 30 Pro နှင့်၎င်း၏အစ်ကို P30 Pro တို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သည့်အလင်းရောင်အခြေအနေအားလုံးတွင်အလွန်လျင်မြန်စွာသော့ဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ၎င်းသည်လုံးဝလုံခြုံမှုရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ဖို့ကတော့ချိန်ညှိချက်များမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ မျက်နှာပြင်တွင်လျှောကျစရာမလိုဘဲ ကြိုတင်၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ငါယနေ့အထိတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအကောင်းဆုံးမျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်းအတွေ့အကြုံ။ ဒါ ၎င်းကို screen ပေါ်ရှိ fingerprint sensor တစ်ခုဖြင့်ဖြည့်ထားသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်ကဲ့သို့လျင်မြန်ပြီးထိရောက်မှုရှိသည်။ သငျသညျ 3D Face ID ကိုသက်ဝင်ခဲ့လျှင်သင်က၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အချိန်မရှိဟုသင့်ကိုအာမခံနိုင်သည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သင့်အားအပိုထပ်ဆောင်းမရှိသော "ပရီမီယံ" ဖုန်းကိုကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုသင်သတိရစေသည်။
ကင်မရာများ - Huawei ၏ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်အလွန်ခုန်ချသည်
ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်ဤစာစောင်တွင်အဓိကအဆင့်ဖြစ်သည် Mate 30 Pro ၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းသည်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Huawei Mate 30 Pro နှင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ DXoMark မှနံပါတ် ၁၊ ၁၂၁ မှတ်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးကင်မရာ လျှောက်လွှာနှင့်စတင်သည်။ EMUI 121 ရောက်ရှိလာခြင်းသည်ကင်မရာအပလီကေးရှင်းအတွက်ကောင်းမွန်သည်၊ ယခုသင့်အားမျက်နှာပြင်အပြည့်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်၊ ခလုတ်များကိုချိန်ညှိပြီးသူတို့သည်အတွေ့အကြုံကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲအဆုံးတွင်အဝါရောင်များကျန်နေမည် ၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုဖွင့် / ပိတ်ကြောင်းဖော်ပြသောအသံများ၊ လျှောက်လွှာများသည်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်မှုရှိပြီးအချိန်တိုင်းဖမ်းယူနိုင်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပိုင်းရှိသည်။ osbtante မဟုတ်, ကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောကင်မရာစစ်ဆေးမှုကိုကြည့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည် (LINK):
ရိုးရာဓာတ်ပုံများတွင် 40 MP၊f/ 1.6 (1 / 1.54″)၊ ၂၇ မီလီမီတာနှင့် optical stabilizer တို့၏အာရုံခံကိရိယာကိုတွေ့ရှိရပြီး၊ အဓိကအားဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်သုံးချက်ရှိသည်။ Artificial Intelligence; စံနှင့် HDR ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီတွင်၎င်း၏အခိုက်အတန့်ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ငါပုံမှန်ဓာတ်ပုံများကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်၊ အကြောင်းမှာဓာတ်ပုံများကိုနောက်ပိုင်းတွင်တည်းဖြတ်လေ့ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အခြေအနေများမည်သို့ပင်ရှိပါစေကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းထားသည့်အသံများကိုပေးစွမ်းသည်။ အလင်း နည်း၍ ပင်ဆူညံသံကိုမြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် application သည် 27 MP ဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်သည်။ ၄၀ MP ဖြင့်အလိုအလျောက် configure လုပ်နိုင်သော်လည်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အခြားတစ်ခုအကြားကွာခြားမှုနှင့်ပြည့်နှက်မှုအဆင့်တွင်သိသာသည်။ 10 MP တွင်မြင့်မားပြီး 40 MP နှင့်အနည်းငယ်ရရှိသည်။ အသေးစိတ်ပိုမိုပေမယ့်အများကြီးလုပ်ငန်းများ၌။ Artificial Intelligence ၏အမှု၌အမြဲတမ်းအရောင်များကိုဖုံးအုပ်။ ပို၍ ထူးခြားသောအရာများပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
10 MP AI အ
ကျနော်တို့ပုံတူ mode ကိုနှင့်ကျယ်ပြန့်ထောင့်ကိုသွား, ယခင်တွင် ToF အာရုံခံစနစ်နှင့်တယ်လီဖုန်းမှန်ဘီလူးတို့ကြောင့်အစွန်းရောက်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိသည်။ တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသောမှုန်ဝါးမှုသည် (အရသာအရ) အနည်းငယ်ရန်လိုသော်လည်း၎င်းသည်အိမ်တွင်းကိုကောင်းစွာကာကွယ်ပေးပြီးပုံမှန်အတိုင်းညသန်းခေါင်ယံတွင်လျော့နည်းစေသည်။ Ultra Wide ထောင့်ကမူကျွန်ုပ်တို့သည် pixel များကျဆင်းခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောအရောင်များရှိခြင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရရှိခြင်းသည်အလင်းရောင်ရှိအဓိကကင်မရာနှင့်နီးစပ်သကဲ့သို့ရလဒ်ကောင်းများရရှိစေသော်လည်း၎င်းကိုစမ်းသပ်မှုပြုလျှင်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ အလင်းနည်းသောကြောင့်။ ပုံတူမြင်ကွင်းကို Aperture စနစ်ဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည် ပိုမို "တည်းဖြတ်နိုင်သော" ရလဒ်များအတွက်အနည်းငယ်ပိုသောအရည်အသွေးကိုပေးသော်လည်းပုံမှန်သုံးစွဲသူအတွက်ရှုပ်ထွေးစေသည်။
Huawei ၏ Night Mode ကွဲပြားခြားနားသောရိုက်ချက်များကိုဖမ်းယူရန်ရိုက်ချက်များအကြားခုနှစ်စက္ကန့်ခန့်စောင့်ဆိုင်းရန်အမြဲတမ်းပြhasနာရှိနေသကဲ့သို့၎င်းသည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက်ပိုသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုလုံလောက်သောအသေးစိတ်နှင့်ဆူညံသံမရှိဘဲကမ်းလှမ်းသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များသည်အမြဲတမ်းလိုလိုပင်အမှောင်ထုဖြစ်နေသောကောင်းကင် ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံ၏လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်သည်။
ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်တာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ် ဤ Huawei Mate 30 Pro သည်မကြာသေးမီက iPhone 11 ၏“ Pro” အကွာအဝေးကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်များနှင့်အမီလိုက်သည်မှာ 4K 60FPS ရိုက်ချက်များတွင်၎င်း၏ပုံသဏ္izationာန်တည်ငြိမ်မှုသည်၎င်း၏ညီငယ်ဖြစ်သည့် Huawei P30 Pro၊ နည်းနည်းချီလွှဲ။ ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောရိုက်ချက်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမြောက်မြားစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာ၏ရှင်းလင်းမှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအော်တိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်အလင်းရောင်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ဖြင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ခလုတ်တစ်ခုအတွက်ဥပမာတစ်ခုမှာဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အတူပါ ၀ င်သော 4K resolution ဗီဒီယိုများကို Huawei Mate 30 နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အထူးဖော်ပြချက်သည် ၇၆၈၀ fps နှုန်းဖြင့် Super Slow ကင်မရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် ၎င်းသည် El Hormiguero အသင်းကိုပင်မျက်နှာမပျက်အောင်ဖြစ်စေသည်၊ ရလဒ်များမှာအံ့မခန်းဖွယ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလင်း နည်း၍ အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး ၏လက်၌ခံစားနေရသော mode ဖြစ်သည်။
Selfie ကင်မရာတွင် Huawei ကကျန်အရာအားလုံးကိုပစ်ချလိုက်သည်, အရည်အသွေးမြင့်ပုံတူကမ်းလှမ်းရန် ToF မှထောက်ပံ့ပေးထားသော 32 MPf/ 2.0 အာရုံခံကိရိယာ။ EMUI 10.0 တွင်အဓိပ်ပါယျကိုရှေးခယျြသူ၊ ညဉျြးနှုနျးနှငျ့အမျိုးမျိုးတို့ကိုတှေ့ရှိရသညျ။ သူ့ကိုသော်လည်း အလှအပပုံစံ ဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် selfie တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်ကျသည်။ ကျွန်ုပ်ယနေ့အထိတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Portrait mode သည်အတုအယောင်ဖြစ်ပုံရပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စမ်းသပ်သည့်အခါတွင်လည်းထိခိုက်နိုင်သည်။ သို့သော်စံ selfie ၏အရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင်မေ့သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤ Huawei Mate 30 နှင့်တစ်လနီးပါးအတူနေခဲ့ပြီးမကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းမျှော်လင့်ချက်အများဆုံးဖြစ်စေသောဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huawei ၏ Mate အကွာအဝေးကိုမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်သင်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်း၏ဖောက်သည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်မျှော်မှန်းကြောင်းသိသည်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်, ငါက panel ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလွန်ဆွဲဆောင်တဲ့ရိုင်းစိုင်းတဲ့ 4.500 mAh ဘက်ထရီတွေ့ပြီ 40 အစာရှောင်ခြင်းဝါယာကြိုးအားသွင်းခြင်းနှင့် 27W အမြန်ကြိုးမဲ့အားသွင်း၏ကမ်းလှမ်း။ ရလဒ်မှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှစ်နာရီရောက်ရှိရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ပလပ်ဂင်အကြောင်းအလွယ်တကူမေ့နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဒီ Huawei Mate 30 Pro ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက ၎င်းသည်ရဲရင့်ခြင်း၊ ရင့်သောမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးလက်ဝတ်ရတနာတစ်မျိုး၊ ထူးခြားသည့်ကင်မရာ module နှင့်သာမန် (Mate 20 နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်း) ဖြစ်သည့်အပြင်အရည်အသွေးအားလုံးရိုက်ကူးနိုင်သည့်ကင်မရာများတွင်ခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို, ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်သက်သေပြ hardware များကအာရုံစိုက်ပြီး၎င်းကို Android နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက် "premium" terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် EMUI 10.0 ဟာအနည်းငယ်ပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့မျိုးဆက်ခုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်အနှုတ်လက္ခဏာများရှိသည် ကျနော့်အမြင်အရ၎င်း၏ curvature ၏ရန်လိုမှုသည် chromomatic aberrations များကိုအသုံးပြုသူအားလုံးနားမလည်နိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာယခုအချိန်တွင်၎င်းသည် Google Play Store မရှိသောကြောင့်၎င်း terminal ၏အဆိုးဆုံးမှာလုံးဝမတရားဘူး ဟွာဝေ၏ရှုံးနိမ့်မှုမဟုတ်ဘဲနောက်ဆုံးတွင်ပေါ်ပေါက်လာသောနိုင်ငံရေးအရသုံးစွဲသူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Huawei အားဗီတိုအာဏာ သုံး၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ဒီ Mate 30 Pro ကိုအပြီးသတ် 2019 ၏အကောင်းဆုံး Android မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက်အဖုံးများအားလုံးရရှိရန်နှင့်ဒီနေရာမှ (ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်) ဆုံးရှုံးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်တရာမတရားမှုဟုထင်ရသည် ။
ဤ Huawei Mate 30 Pro သည် ၁၀၉၉ ယူရိုကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးမက်ဒရစ်ရှိ Huawei အာကာသမှာ ၀ ယ်ဖို့နို ၀ င်ဘာ ၁၇ ရက်အထိကြိုတင်မှာထားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ကိုလက်ခံမှာလဲ € 299 ချက်လက်မှတ်တစ်ခု အမှတ်တံဆိပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့။
Huawei Mate 30 Pro: အများဆုံး
Nota del အယ်ဒီတာ: Huawei ၏ဗီတိုအာဏာသည်မကြာမီရုပ်သိမ်းသွားပြီဖြစ်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့် Huawei နှင့်မကိုက်ညီသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဤကိရိယာရှိ "software" အဆင့်ရှိအချက်များကိုနုတ်ရန်မတရားသည်။ ငါဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးနှင့်ဂူဂဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူငါတန်ဖိုးအတိုင်းလုပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Mate 30 Pro နှင့် Huawei ၏“ အကောင်း” ဖြစ်မှုကိုအသေးစိတ်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
ဂူးဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်မပြုသည့် (စိတ်ပျက်ဖွယ်) အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုအတွက်မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်ဝယ်မည်။ ငါကံဇာတာကိုမပေးတော့ဘူး၊ ပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲက "လက်မှုပညာ" တွေလုပ်ရမယ်။
Huawei Mate 30 Pro - ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကင်မရာ? [ကင်မရာစမ်းသပ်မှု]
လက်ထောက် Cortana သည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလတွင်မိုဘိုင်းဂေဟစနစ်မှထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်